व्यवसायमा ध्यान समाज उत्थानको चिन्तन | गृहपृष्ठ
Home समाचार व्यवसायमा ध्यान समाज उत्थानको चिन्तन
व्यवसायमा ध्यान समाज उत्थानको चिन्तन
राजनीतिज्ञको व्यवसाय – पवित्रा ढकाल
सभासद्, नेपाली काङ्ग्रेस
प्रबन्धक निर्देशक, गौतम ट्रेडिङ
आर्थिक विकास नभई राजनीति पनि समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्ने ओमप्रकाश शर्मा संविधानसभा सभासद् हुन् । राजनीति र व्यवसायलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै आएका शर्मा ‘गौतम टे्रडिङ’का प्रबन्धक निर्देशक हुन् ।
उनको परिचय राजनीति र व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै जमेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं २ बाट शर्मा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी २०३७ सालतिर विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसबेला देशमा पञ्चायतविरुद्धको आवाज चुलिँदै थियो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू वीरगञ्ज जाने/आउने गरिरहन्थे । स्कूल पढ्दै गरेका शर्माको काङ्ग्रेसका नेतासँग बाक्लै भेटघाट हुने गर्थ्यो । आफ्नो राजनीतिक यात्राको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध लेखेका नारालाई स्थानीय ‘अचेल’ नामक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न म सहयोग गर्थें । त्यसबेला म कक्षा ७ मा पढ्थेँ । ‘साना केटाकेटी/विद्यार्थीलाई पुलिसले सामान्यत: नपक्रने भएकाले पनि पार्टीलाई सघाउन मलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’
कलिलै उमेरबाट राजनीतिमा लागेका शर्माले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षा पूरा गर्न सकेनन् । बीपी कोइरालाको राजनीतिक विचारबाट प्रभावित उनको ‘इमानदार राजनीतिज्ञ हुनका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरता जरुरी छ’ भन्ने ठहर छ । यसै विचारलाई कार्यान्वयन गर्न ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अध्ययन गर्दैगर्दा २०४० सालदेखि उनले व्यवसायमा हात हालेका हुन् । काठमाडौंबाट स्टेशनरीका सामान वीरगञ्ज लगेर बेच्ने कामबाट उनको व्यावसायिक यात्रा शुरू भएको हो । शुरूका दिनमा व्यवसायमा जम्न आफूलाई निकै गाह्रो परेको उनी बताउँछन् । २०४१ सालमा साथीहरूबाट १५ हजार रुपैयाँ सापटी लिएर शर्माले ‘सुवास इण्टरप्राइजेज’ खोले । तर, घाटामा गएपछि २ वर्षमा नै उनले उक्त पसल बन्द गर्नुपर्यो । त्यसपछि सुनचाँदीको व्यापारतिर लागे । यो व्यवसायमा पनि शर्माले सफलता हात पार्न सकेनन् । ‘एकपछि अर्को व्यवसायमा सफलता नमिले पनि हिम्मत हारिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘परिवारको मान्यता पैसाले मानिसलाई कमाउने नभएर मानिसले पैसा कमाउँछ भन्ने थियो, यही उक्तिलाई शिरोधार्य गर्नाले आज म संविधान सभामा छु ।’
यही विचारले आफूलाई मेहनती बन्न हौसला प्रदान गरेको उनी बताउँछन् । विगतका दिनहरूमा एक छाकमात्र खाएर पनि व्यवसायलाई अगाडि बढाउन गरेको मेहनत शर्मालाई अहिले पनि प्रेरणादायी लाग्छ । ‘ती दिन मेरा लागि निकै संघर्षपूर्ण थिए । आर्थिक सङ्कट बढ्दै गइरहेको थियो । त्यसैबेलादेखि थोरै पैसालाई पनि योजना बनाएर व्यवस्थित किसिमले परिचालन गर्ने मैले बानी बसालेँ,’ उनी भन्छन् । त्यही बानी आज पनि आफ्नो जीवनमा लागू भएको उनको भनाइ छ । ‘पैसाको मूल्य बुझेकै कारण आजसम्म आफू धूमपान र मद्यपानको अम्मलबाट टाढै बसेको छु,’ उनले भने ।
२०५२ सालमा सङ्गीतसँग सम्बन्धित सामानको पसल खोलेपछि आफ्नो व्यवसायले गति लिन थालेको शर्मा बताउँछन् । २०६१ सालमा उनले साथीसँग मिलेर ‘डीबी इण्ड्रष्ट्रिज’ नामक कम्पनी खोले । यसले मोजाका लागि चाहिने धागो उत्पादन गर्छ । केही वर्षअघिदेखि उनले अर्को कम्पनी ‘गौतम ट्रेडिङ’ पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसले सबै किसिमका कपडामा प्रयोग गरिने धागो विभिन्न देशबाट आयात गर्दै आएको छ । यसको वार्षिक कारोबार ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि हुने शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता रहे पनि पदको लोभ कहिल्यै नगरेको उनी बताउँछन् । ‘म व्यवसाय र राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय थिएँ । तर, पदमा बसेर कहिल्यै काम गरिनँ । कुनै पदमा नबसे पनि पार्टीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्दै आएकै कारण काङ्ग्रेसले आफूलाई सभासद् बनाएको उनको ठहर छ । माडवाडी समुदायबाट पार्टीले आफूलाई समानुपातिकतर्फ छान्दा ‘दिवास्वप्न’झैं लागेको शर्मा बताउँछन् । ‘यस्तो पदको मैले आशा र कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ,’ उनले भने ।
सभासद् भएपछि शर्मा निकै व्यस्त हुन थालेका छन् । राजनीति र व्यवसायको दौडधुपले परिवारलाई समय दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला त म आफ्नो हिसाबले पार्टीमा सक्रिय रहन्थेँ । तर, अहिले परिवार र व्यवसायलाई भन्दा पनि राजनीतिक काममा पूर्ण समय दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसाय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्टाफहरूलाई दिएको छु ।’ घरपरिवार, राजनीति वा व्यवसाय जहाँ पनि ‘टीमवर्क’, विश्वास र जिम्मेवारीको सही बाँडफाँटलाई नै एकता र सफलताको सूत्र मान्छन् शर्मा ।
जनतासँग मागिएको थप १ वर्षको समयमा पनि संविधान बनाउन नसकेकोमा उनी निकै ग्लानी महसूस गर्छन् । ‘हामीले जनतालाई भनेकै समयमा संविधान दिनुपथ्र्यो, तर सकिएन । अहिले ३ महीना थपिएको छ, यो हाम्रा लागि अग्निपरीक्षा हो । संविधान बन्न अब ढिला हुनुहुन्न,’ उनी भन्छन् । पूजा गर्नका लागि मन्दिर बनाउनुभन्दा स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पताल बनाउनुपर्ने भावना राख्ने शर्मा समाजसेवा गर्न पाउँदा औधी खुशी हुन्छन् ।
बाबुराम समूहको अलग्गै भेला
जेठ २७, चितवन (अस) । चितवनको दारेचोकमा बिहीवार माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई समूहका कार्यकर्ताको अलग्गै भेला सम्पन्न भएको छ । बाबुरामका पक्षधर मानिने सुनिल पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा चितवनमा भेला डाकिएको हो ।
भेलामा चितवन, गोरखा, तनहुँ र लमजुङका गरी १ सय ७० जनाको सहभागिता थियो । गोरखामा पछिल्लो समयमा एमाओवादीका तीनै गुटको प्रभाव बढेको छ । नेतृत्व तहमा संस्थापन पक्षका धेरै छन् भने तल्लो तहमा बाबुरामका कार्यकर्ता बढी छन् ।
बाबुरामको पक्षमा सभासद् ज्ञानेन्द्र कुमाल र राज्य समिति सदस्य यानप्रसाद भट्ट खुलेरै देखा परेका छन् । एमाओवादीलाई अहिलेको अवस्थासम्म बाबुरामको चिन्तनले ल्याएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । एमाओवादी पार्टीभित्र आन्तरिक कारबाहीमा परेका अधिकांश कार्यकर्ता बाबुरामको पक्षमा उभिएका छन् ।
खाका तयार गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई
जेठ २७, काठमाडौं (अस) । राज्य पुन:संरचना समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विवादित विषयलाई एकीकृत एवम् व्यवस्थित गरी खाका तयार गर्न विवाद उपसमितिको बैठकले संविधानसभा सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित उक्त समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णयगरेको हो । सो बैठकमा राज्यको पुन:संरचना समितिले छलफलका लागि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
विवादित विषयबारे राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गरी उपसमितिको आगामी बैठकमा समाधान प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी उपसमिति सदस्य एवम् काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
‘राज्यको पुन:संरचनाको विषय गम्भीर रहेकाले यसबारे राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बाहिर मोटामोटी सहमति भएपछि उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भयो ।’
बैठकमा संवैधानिक समितिको सचिवालयबाट गृहकार्य भई परामर्शका लागि पेश भएको संवैधानिक समितिको आन्तरिक कार्यतालिकामाथि पनि छलफल भएको उपसमितिका सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिए ।
राज्यको पुन:संरचनाको प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका बुँदालाई राजनीतिक तहमा सहमति भएपछि उपसमितिमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रस्तावित आन्तरिक कार्यतालिका छलफलका लागि समय चाहिएको भन्दै उपसमितिको अर्को बैठक आगामी जेठ ३० गते सोमवार बस्ने निर्णयभएको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ संविधान लेखनका लागि राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । सो बैठकमा उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल अनुपस्थित भएका कारण विवादित विषयलाई सुल्झाउन कार्यदल गठन हुन सकेन ।
‘पाँचबुँदेको आधार तयारपछि राजीनामा’
जेठ २७, विराटनगर (अस) । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले पाँचबुँदे सहमतिको आधार तयार भएमात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताएका छन् । ‘वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलिरहेको छ ।’
विराटनगरमा शुक्रवारदेखि सञ्चालन हुन लागेको ‘सेण्ट लरेन्स अन्वेषणसम्बन्धी बृहत् विज्ञान प्रदर्शनी-२०६८’ उद्घाटन गर्न आएका मन्त्री सापकोटाले पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले तीन दलबीच सेना समायोजनसम्बन्धी बैठक बसेको जानकारी दिए । सापकोटाले माओवादी लडाकूहरूको समायोजन सम्बन्धमा प्याकेजअन्तर्गत पुन:स्थापना र सरकारी सेनामा समायोजन हुने सम्बन्धमा विशेष समितिले गरेको निर्णयकार्यान्वयन हुने बताए । उनले सेना समायोजन सम्बन्धमा ३ महीनाभित्र आधार तयार हुने विश्वास प्रकट गरे ।
मन्त्री सापकोटाले सरकारले सुडान भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै यसका दोषीहरू जोसुकै भए पनि कारबाही हुने बताए । देशको वर्तमान परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय सरकार अपरिहार्य रहेकोमा उनको जोड थियो ।
यसैबीच मन्त्री सापकोटाले विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइते पत्रकार खिलानाथ ढकालको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए । कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले अपराधीलाई कुनै हालतमा नछोड्ने आश्वासन दिए ।
लडाकू व्यवस्थापन नगरी अन्य काम हुँदैन : डा. महत
जेठ २७, चितवन (अस) । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन नगरेसम्म देशका अधुरा कुनै काम अघि नबढ्ने बताएका छन् । ‘संविधान जारी गर्ने काम पनि सेना समायोजनपछि मात्रै हुन्छ,’ उनले भने ।
चितवनस्थित रत्ननगरमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका डा. महतले भरतपुर विमानस्थलमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका महतले दोहोरो सुरक्षा हटाए पनि माओवादी नेताहरूसँग अझै लडाकू र हतियार रहेको बताए । ‘त्यसैले लडाकू व्यवस्थापन नगरी कुनै काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने । लडाकू समायोजन नभए भदौ १ गते संविधानको प्रारम्भिक खाकासमेत नआउने उनको भनाइ थियो । केही दिनअघि संवैधानिक उपसमितिले भदौ १ गतेभित्र संविधानको प्रारम्भिक खाका ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
लडाकू रेखदेख तथा समायोजन एवम् विशेष समिति मातहतको सचिवालयले पुन:स्थापना रोज्ने लडाकूहरूलाई साढे चार लाख दिने भन्ने प्रस्ताव विशेष समितिलाई थाहै नभएको जिकिर गरे । अहिलेको सरकारले राजीनामा दिने सहमति जनाइसकेकाले राष्ट्रिय सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न उनले एमाले र एमाओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । सहमतिबाट बजेट ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘एकलौटी रूपमा बजेट ल्याउन खोजे काङ्ग्रेसले सख्त प्रतिकार गर्छ,’ उनले भने ।
काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति भेला आज
जेठ २७, काठमाडौं (अस) । काभ्रेको धुलिखेलमा शनिवारदेखि शुरू हुने काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको दुईदिने भेलाको तयारी पूरा भएको नेपाली काङ्ग्रेसले बताएको छ । भेलाको पहिलो दिन साँगाबाट धुलिखेलसम्म मोटरसाइकल र्याली गरिने स्थानीय व्यवस्थापन समितिले जानकारी दियो ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आयोजना हुन लागेको सो भेलाका लागि काभ्रेको साँगाबाट धुलिखेलसम्म स्वागत तुल, ब्यानर एवम् पार्टीका झण्डा ठाउँठाउँमा टाँगिएको छ । काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भेलाको तयारी पूरा भएको बताए । दुईदिने सो भेलामा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र काङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । भेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू र जिल्ला सभापति र कर्मचारी गरी १ सय ६० जनाको सहभागिता रहने काभ्रे जिल्ला सभापति शिवप्रसाद हुमागार्इंले बताए ।
शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन तथा संविधान लेखनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले शुरू गरेको दशबुँदे मार्गचित्रको आधारमा संविधानसभाको थपिएको ३ महीनाभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका नै मुख्य एजेण्डा हुने बताइएको छ ।